Ziziphi iindidi ze-SEO ezingekho phantsi?
Ngaphambi kokuba siqale ukujonga indlela i-SEO engasebenzi ngayo, machaze ukuba yiyiphi i-SEO engalunganga.
Uhlobo lwe-SEO engalunganga
Ngokucacileyo, i-SEO engalunganga isebenzi yemisebenzi ekhohlakeleyo ekujoliswe ekunciphiseni izikhundla zakho kwiziphumo zophando. Umzamo onobungozi owenziwe kwiwebhusayithi yakho ngokuqhelekileyo i-off-page, ithetha ukuqhagamshelana kwesiqhelo esingavumelekanga kwisiza sakho okanye ukubuyisela kwakhona umxholo wesiza sakho.
Nangona i-SEO engafanelekanga yimbangela eqhelekileyo yokwehla kwamaconsi, kulungele ukuba ukwazi ukuchaza ukuba umntu ophazamisa izikhundla zakho ngamabomu.
I-Off-page engabonakaliyo SEO
I-SEO engafanelekanga ikhasi libhekisela kwi-SEO ejolise kwiwebhusayithi yakho ngaphandle kokuphazamiseka kwangaphakathi - puff sofa. Nolu uluhlu lwezinto eziqhelekileyo ezibonakalayo ezingekho phantsi kwephepha-SEO ithatha:
Kukho ithuba elincinci lokuba unxibelelwano oluncinci lwe-spammy luya kulimaza lakho i rankings site. Nangona kunjalo, xa kuziwa ekudibaniseni iifama, ubuchule bokuhlaselwa bukhulu kakhulu.
Njengomthetho, ezininzi iinxulumano ze-hacker zisebenzisa i-anchor efanayo. Ezi zikhonkwane ezihambelanayo zingabandakanyekanga kwiwebhusayithi phantsi kokuhlaselwa okanye zibandakanya igama elingundoqo lokujolisa ukwenza iprofayile yekhonkco yesibonelelo ibonakale nje ukuba umnini uyayisebenzisa.
Ukukhusela ukuhlaselwa okunjalo, qhosela rhoqo ukukhula kwenkcazo yakho yekhonkco.
Isixhobo se-SEO SpyGlass sinokukunceda oko kuba kukunika inkqubela kwiigrafu zombini:
Inani leenkundla ezibhekiselele;
Inani lamanqaku kwiprofayili yakho.
I-spike engavumelekanga kuyo nayiphi na imeko yezi zimbini zaneleyo ukujonga kwiingqungquthela osanda kuzuza.
Enye indlela abaqhubeneyo bangayonakalisa izikhundla zakho ngokuskena nokukopisha umxholo wakho nakwezinye iiwebhusayithi. Oku kusebenza ngale ndlela: xa injini yokukhangela ithola umxholo ofanayo kwiwebhsayithi ezininzi, ithatha inguqu enye kuphela. Nangona iinjongo zophando zichonga ngokukhawuleza uguqulelo lwangaphambili, kukho ixesha lokuhlala ngaphandle.
Ukuba ufuna ukuqiniseka ukuba umxholo wakho awunakucatshulwa ngamanye amasayithi, ungcono uhlolisise rhoqo rhoqo ngeCopyscape ithuluzi eligqibeleleyo libonisa iziganeko zokuphindaphinda. Kwimeko apho ufumana iikopi ezifakwe kumxholo wakho, qha ga mshelana naye kwaye umcele ukuba asuse isiqwenga.
I-SEO engekho kwiphepha le-OO
Ukuhlaselwa kwe-SEO engekho kwiphepha elichaphazelekayo kubandakanya ukuhlaselwa kwiwebhusayithi yakho nokuguqula izinto. Kukho indlela enzima ukuyisebenzisa ngaphandle kokuhlaselwa kwe-SEO. I-SEO esongelayo ukuhlaselwa kwe-hacker ingabandakanya:
Eli qhinga lilukhuni ukubona. Ngokuqhelekileyo, i-hacker yongeza umxholo we-spammy kwisayithi. Ekubeni ezo ziqhagamshelwano zifihlakele, awuyi kubona ngaphandle kokuba uhlole ikhowudi.
Isimo esisodwa se-SEO esingenakunokwenzeka xa kukho umhlaseli aguqula amaphepha akho, aqondise kwakhona kumaphepha akhe ewebhu. Abanye abanikazi beewebhu basebenzisa le ndlela yokukhulisa i-PageRank yabo yesayithi okanye ukuqondisa abasebenzisi kwisayithi yabo xa bezama ukufikelela yakho. Ukuba iinjongo zokukhangela zifumanisa malunga nokuhanjiswa ngaphambi kokuba wenze, banokuthi bahlawulise imithombo yakho yokuncedisa ukubuyela kwiwebhusayithi enobungozi. Ukuphicothwa rhoqo kwendawo yesayithi kunye nesisombululo esifana ne-WebSite Auditor yindlela efanelekileyo yokubona ezi hlaselo.
Ukufumana i-site De-indexed
Unokumangaliswa, kodwa utshintsho oluncinci kwifayile efana neerobhothi. I-txt inokuphanga isicwangciso sakho sonke seSOO sokuthengisa. Ulawulo olungavumelekanga ludinga konke ukuxelela i-injini yokusesha ukungawunaki imithombo yakho. Ilusizi kodwa yinyani.
Ngenhlanhla, kukho into onokuyenza ukukhusela loo mkhuba. Ukuhlolwa rhoqo kwendawo kukunceda ube ngowokuqala ukwazi ukuba umthombo wakho unokufumana i-indexed. I-Rank Tracker iyithuluzi elikhulu ongayisebenzisa ukuze uhlele isheke ngokuzenzekelayo. Umzuzwana isayithi lakho ngokukhawuleza lihla kwii-Google 'iziphumo, uza kubona inqaku eliphosiweyo kwikholam eyahlukileyo. Elula njengoko.